Mee ka ntụgharị gị kwalite site na ịlụ ọgụ ndị na-egbu mmadụ 5 a | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere otu ụlọ ọrụ na ntanetị nke na-enyocha ma tụọ ọnụego ntụgharị n'ofe mgbanwe ọ bụla, ọ bụ ndị folks Mpempe akwụkwọ! Anyị abụwo ndị enyi, ndị agbapụ, na ndị mmekọ nke otu egwuregwu ọtụtụ afọ, ọ naghị ewute na ha nọ ebe a na Indianapolis!
Ihe omuma ohuru a na ihe omuma site na Mpempe akwụkwọ na-arụtụ aka n'okwu 5 nwere ike na-ewute oke mgbanwe gị:
Ndebanye aha na mgbasa ozi - rụọ ụzọ dị mma karịa ụdị ndebanye aha. N'ezie, 87% nke ndị ọrụ agaghị abanye maka akaụntụ ma ọ bụrụ na ọ malitere site na usoro ndebanye aha. Agbanyeghị, 77% nke ndị ọrụ ga-eji nbanye ntanetị mmekọrịta na kickstart ndebanye aha
Ewepụghị Oku na-Action - mgbe obere ahịrịokwu obere okwu nwere otu okwu abụọ na-eme ka mgbanwe ndị ọzọ gbanwee, ịgbakwunye otu okwu nwere ike ịbawanye ọnụego ntụgharị 320% Dịka ọmụmaatụ, gbakwunye Ugbu a! gị nyefere ederede.
Ahịa Email - dị mkpa iji zụlite ndu nke nwere ike ọ gaghị adị njikere ịgbanwe taa. N'ezie, 68% nke ndị na-ere ahịa na-akọ na ịre ahịa email nwere ezigbo ma ọ bụ nloghachi magburu onwe ya na ntinye ego Ya mere, ewezuga ịnye ntụgharị, jụọ onye zụrụ ahịa na-adịghị njikere ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ gị ka ịdebe gị n'uche mgbe ha nọ. dị njikere!
Oge Ibu Ibu - emela naanị imerụ gị ahụ site na ogo ọchụchọ, ha na-egbukwa mgbanwe. Ntọala nke abụọ na oge ibu nwere ike belata afọ ojuju onye ọrụ site na 3.8%, bulie ego furu efu kwa onye ọrụ site na 4.3%, ma belata clicks site na 4.3%
Onu ahia na Nyocha - ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ na-amaghị ama bụ nnukwu nsogbu na ntanetị, mana ọkwa na nyocha nwere ike inyere aka nke ukwuu. Ihe karịrị 70% nke ndị America na-ekwu na ha na-elele nyocha ngwaahịa tupu ha azụta ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 63% nke ndị ahịa nwere ike ịzụta site na saịtị nwere ha
Nke a bụ ozi zuru ezu, Ahịa Ahịa nke Nduzi Maka Ndị Na-atụgharị Ntugharị, si Mpempe akwụkwọ.
Tags: mee ka mgbanweederede bọtịnụkpọọ n’ọrụntụgharị ntụgharịntughari ederedemgbanweemail Marketingmpempe akwụkwọdịkwuo akakabaredemụbaa mgbanweibu ogengwaahịa Fimngwaahịa Fim na reviewsnnyocha ngwaahịangwa ngwa ibu ogenbanye nke ndi mmadundebanye aha na-elekọta mmadụntinye aka na mgbasa ozi